Priyanka Chopra နဲ့ သူမရဲ့ မင်္ဂလာဆောင်တွေအတွင်း ဝတ်ဆင်ခဲ့တဲ့ ခံ့ငြားထည်ဝါတဲ့ဝတ်စုံများ။ – SoShwe
Home/Entertainment/Priyanka Chopra နဲ့ သူမရဲ့ မင်္ဂလာဆောင်တွေအတွင်း ဝတ်ဆင်ခဲ့တဲ့ ခံ့ငြားထည်ဝါတဲ့ဝတ်စုံများ။
Priyanka Chopra နဲ့ သူမရဲ့ မင်္ဂလာဆောင်တွေအတွင်း ဝတ်ဆင်ခဲ့တဲ့ ခံ့ငြားထည်ဝါတဲ့ဝတ်စုံများ။
admin December 26, 2018	Entertainment Leaveacomment
Priyanka Chopra နဲ့ Nick Jonas တို့ဟာ ဒီလအစောပိုင်းတုန်းက မင်္ဂလာဆောင်ခဲ့ကြပြီး မင်္ဂလာပွဲအခမ်းအနားတွေအတွက်လည်း ငွေကြေးအမြောက်အမြား သုံးစွဲခဲ့ပါတယ်။ မင်္ဂလာပွဲမှာတော့ သတို့သမီးဟာ (1209၇၅)ပေရှည်လျားတဲ့ ဇာပုဝါပါးနဲ့ သတို့သမီးဝတ်စုံကို ခမ်းခမ်းနားနား ဝတ်ဆင်ခဲ့ပါတယ်။ သူမရဲ့ မင်္ဂလာဆောင်ပွဲတွေအပြီးမှာတော့ နယူးဒေလီနဲ့ မွန်ဘိုင်းတို့မှာလည်း ပါတီပွဲတွေ ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။
သူတို့ဇနီးမောင်နှံမှာ ဒီလထဲမှာ မင်္ဂလာပွဲတွေ၊ ပါတီပွဲတွေ အမြောက်အမြား ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ထို့အပြင် နောက်လထဲမှာလည်း သူတို့ရဲ့ Hollywood က သူငယ်ချင်းတွေအတွက် ပါတီပွဲတွေ ကျင်းပပြုလုပ်ပေးဖို့ရှိတယ်ဆိုပြီး သတင်းများ ထွက်ပေါ်လျက်ရှိပါတယ်။
နယူယောက်ရှိ Tiffany’s Blue Box Cafe မှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ သူတို့ရဲ့ မင်္ဂလာပွဲကို ဝတ်ဆင်သွားတဲ့ဖက်ရှင်ပုံစံ။
အိန္ဒိယအယူအဆအရ အကြိုမင်္ဂလာပွဲ (1209Mehendi) ပွဲတွင် ဝတ်ဆင်ခဲ့တဲ့ ဖက်ရှင်ပုံစံ။
Ralph Lauren က (1209၇၅)ပေအရှည်ရှိ မင်္ဂလာဝတ်စုံနဲ့ လှပနေတဲ့ သတို့သမီး။
ဟိန္ဒူဓလေ့ရိုးရာမင်္ဂလာဆောင်တွင် တွေ့ရသော Priyanka
မင်္ဂလာပွဲတွေကျင်းပပြီးနောက် Jodhpur သို့ထွက်ခွာမယ့်အချိန် တွေ့မြင်ရပုံ။
နယူးဒေလီမှာ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ မင်္ဂလာဧည့်ခံပွဲတွင် တွေ့မြင်ရပုံ။
မင်္ဂလာဆောင်တုန်းကပုံကို Instagram မှာ ပြန်တင်ထားပုံ။
မွန်ဘိုင်းမှာ (1209၂)ရက်ဆက်တိုက် မင်္ဂလာအခမ်းအနား ကျင်းပခဲ့ပုံ။
သူမရဲ့ ပါတီပွဲတစ်ခုမှာ တွေ့မြင်ရပုံ။
Previous ?????????????????? ????????????????? ?????????????? ????????????????????? Netflix ??? ????????????????
Next Miley Cyrus ??? Liam Hemsworth ???? ????????? ??????????????????????? ? ? ?